Schweini: Qof walba in uu Mourinho u ciyaaro ayuu rabaa – Gool FM
(Manchester) 25 Maajo 2016. Bastian Schweinsteiger waxa uu aaminsan yahay in 2016-17 in uu ahaan doono mid la yaab leh iyad aoo uu Mourinho yahay ninkahaya maamulka Manchester United.
United wali kuma aysan dhawaaqin magacaabista tababarihii hore ee Chelsea kaddib markii ay eryeen galabtii Isniinta Louis Van Gaal.
Schweinsteiger waxa uu qabaa in Mourinho uu la iman doono enerji cusub Old Trafford.
“Ma garaneyno qofka noqon doona tababareheena cusub wali, laakiin waxa ay u egtahay in xifaaltanka Manchester uu xiise yeelan doono xilli ciyaareedka dambe,” ayuu Schweinsteiger ku sheegay shir jaraa’id.
“Muxubada kubadda cagta Manchester waa mid weyn hadii uu Mourinho xilka United la wareego, waxaan qabaa in ciyaaryahaanda dhamaan ay rabaan in ay ka hoos tababartaan waxa uuna noqon doona xilli ciyaareed gaar ah.”
EEG SAWIRKA: Malaha Baabuurkan waa kii Jose Mourinho u qaadi lahaa Man United